Xukuumadda Somaliland ayaa ku dhawaaqday Xaalada Abareed oo Dalka ka Jirta | Hargeysa World~Herald
Wararka CaalamkaXukuumadda Somaliland ayaa ku dhawaaqday Xaalada Abareed oo Dalka ka Jirta
(Khamiis, 13-01-2022)-Xukuumadda Somaliland ayaa ku dhawaaqday xaalad abaareed oo ka taagan deegaanada somaliland. abaartan ayaa ka dhalatay markii deegaanada hawdka iyo barigu ay waayeen roobkii dayrta.
Madaxweyne-k-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa maanta oo khamiisa madaxtooyada kaga dhawaaqay xaaladdan abaared ee ka taagan gobolada bariga iyo hawdka.
xilli roobaadka gu’ga iyo dayrta ayay dadka xoola dhaqatadi ahi ku tiirsanyihiin. sanadkii 2021-ka waxaa la waayey deegaanada qaar dayrtii. gobolada sool, Togdheer, Daadmadheedh iyo Hawd kamay di’in roobab wanaagsan xilli dayreedkii ku astaysnaa bisha Noofeembar ilaa Diisembar.
guddoomiya guddida abaaraha Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, ahna Madaxweyne-ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Saylici oo maanta la hadlay warbaahin ayaa ku dhawaaqay xaalad abaared oo ka taagan Guud ahaan deegaanada Somaliland.
“Waxaan Maanta halkan u soo joogsanay anagoo ah guddidii gurmadka abaaraha Qaranka inaan ku dhawaaqno in abaartii meel adag marayso’, ayuu yidhi, Madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland.
Mudane saylici waxa uu sheegay in guddidani u taagantahay ka wakreenidda xaaladda abaaraha dalka iyo sidii ay kaalin muhiima uga qaadan lahayd taakulaynta dadka.
Xafiiska Wararka Hargeysa Herald. Xafiiska Magaalada Hargeysa.